Ajandaha Shirka Madaxda Afrika Uga Socda Johannesburg Oo Ka Hortagga Al-shabaab ku jiro - SomalilandPost
Home News Ajandaha Shirka Madaxda Afrika Uga Socda Johannesburg Oo Ka Hortagga Al-shabaab ku...
Ajandaha Shirka Madaxda Afrika Uga Socda Johannesburg Oo Ka Hortagga Al-shabaab ku jiro
Johannesburg, (SLpost)- Madaxda Afrika ayaa maanta shirkii Midowga Afrika ku yeelanayaan magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika.
Hal-kudhegga rasmiga ah ee shirkan oo ah kii 25-aad ee Midowga Afrika ayaa ah “Sanadka Xoojinta iyo Horumarinta Haweenka”.
Hase yeeshee arrimaha la filayo inay horkacaan ajandaha ayaa waxa ka mid ah weerarrada ajaanib nacaybka ah ee dhawaan ka dhacay Koonfur Afrika, jahwareerka ka taagan Burundi, dhibaatada ka jirta Koonfur Sudan iyo arrimo kale.
Midowga Afrika ayaa inta badan waxa lagu dhaliilaa inuu ka fogaanayo wax ka qabashada xaaladaha huraya ee saamaynta ku leh qaaradda, sannadkanna shir-madaxeedka lama filayo inuu ka duwanaado kuwii ka horreeyay.
Dadka wax indha-indheeya waxay sheegayaan in dooddo la qaban doono, laakiin natiijadu ay noqon doonto meel madhan.
Ajandaha buuxa waxa la filayaa inuu diiradda saaro Burundi, qalalaasaha Koonfur Sudan, mashaakilka Nigeria ka haysata dagaalka ay kula jirto Boko Xaraam iyo khatarta ay Al Shabaab ku hayso Afrikada Bari.
Madaxweynaha Sudan Cumar Al-Bashiir, oo ay Maxkamadda Caalamiga ah ee Dembiyada u doonayso eedeymo ku saabsan dembiyo dagaal ayaa sidoo kale jooga magaalada Johannesburg si uu shirka uga qayb galo.
Amnesty International ayaa ugu baaqday xukuumadda Koofur Afrika inay xidho oo gacanta u galiso maxkamadda ICC.
Laakiin qalalaasihii u dambeeyey ee ajinabi nacaybka ah ee magaalooyinka Johannesburg iyo Durban ayaa weji gabax ku noqday dalka shirkan marti-galinaya.